इस्कोर्ट्सको दशैं तिहार उपहार भरमार अफर – Maitri News
इस्कोर्ट्सको दशैं तिहार उपहार भरमार अफर
काठमाडौँ । नेपालका लागी इस्कोर्ट्स कन्टक्सन इक्विपमेन्टको आधिकारिक विक्रेता आइएमई अटोमोटिभ्स् प्रा. लि. ले इस्कोर्ट्स मेसिन खरिदका लागि दशै तिहारमा विशेष अफर ल्याएको छ । सो अफर अन्र्तगत कुनै पनि इस्कोर्ट्स मेसिनको खरिदमा अब ग्राहकले यासुदा ब्राण्डको होम एप्लिएन्स प्याकेज पाउनुको साथै थप डिस्काउन्ट पनि पाउनेछन् ।
इस्कोर्ट्स ब्रान्डको पिक एण्ड क्यारी क्रेन नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय र सर्वाधिक बिक्री हुने मेसिन हो साथै ब्याको लोडर, रोलर र कम्प्याकटर लगायतका मेसिनहरुको उत्पादन पनि बजारमा छन् । कम इन्धन खपत, मर्मत खर्च कम र उत्कृष्ट कार्यक्षमताले यो मेसिनहरु नेपालमा धेरै बिक्रि हुने गरेका छन् ।
इस्कोर्ट्सले बिक्रि लाई मात्र नभइ बिक्रि पछिको सेवालाई जोड दिँदै नेपालको बजारमा राम्रो स्थान बनाउन सफल भएको हो ।
Previous Previous post: आइएमई पे ले ल्यायो दसैँको किनमेलमा तीस प्रतिशत क्यास ब्याक अफर
Next Next post: देशभर ४ हजार ४७ कोरोना संक्रमित थपिए